🥇 दन्तचिकित्साको लेखा
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 525
दन्तचिकित्साको लेखाको भिडियो
दन्तचिकित्साको एक लेखा आदेश दिनुहोस्
दन्तचिकित्सा र दन्त चिकित्सा क्लिनिकहरू सबै ठाउँमा खुल्दै छन्। तिनीहरू मध्ये प्रत्येकको आफ्नो ग्राहकहरुको सूची छ जो कामको स्थान, निवास, र प्रदान गरिएको सेवाहरूको दायरा, मूल्य निर्धारण नीति र अन्य धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। दन्तचिकित्सामा ग्राहकहरूको लेखा एक धेरै श्रम र समय खपत प्रक्रिया हो। यो समयमै सम्पर्क जानकारी राख्न र अपडेट गर्न मात्र आवश्यक छैन, तर प्रत्येक ग्राहकको मेडिकल हिस्ट्री ट्र्याक गर्नका साथै अनिवार्य र आन्तरिक रिपोर्टि ofका धेरै कागजातहरू भण्डारण गर्न पनि आवश्यक छ। दन्तचिकित्साको उत्पादन प्रक्रियाको साथसाथै दन्तचिकित्साको ग्राहकहरूको लेखाको पनि सुधार हुन्छ। भाग्यवस, प्राविधिक प्रगति र चिकित्सा सेवाहरूको बजार सधैं हातमा गएको छ। दंत चिकित्सकहरू अब प्रत्येक दिन धेरै फार्महरू र कागजातहरू भर्न, मैन्युअल रूपमा ग्राहक कार्ड र उनीहरूको मेडिकल ईतिहास राख्ने धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता बिर्सन सक्दछन्। दन्तचिकित्सा व्यवस्थापनको अब स्वचालित लेखा प्रणाली तिनीहरूको लागि यो गर्न सक्दछ। आजसम्म, दन्तचिकित्सा लेखांकनको USU- सफ्ट अनुप्रयोगले उत्तम तरिकामा प्रमाणित गरेको छ। यसले धेरै देशहरूको बजारलाई द्रुत रूपमा जितिरहेको छ। एनालगको तुलनामा दन्तचिकित्सा खाताको अनुप्रयोगको मुख्य फाइदा यसको उच्च गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रयोगमा सजिलो छ।
प्रशासकहरू र सहायकहरूलाई प्राय: जसो उनीहरूले काम गर्ने घण्टा - घण्टा वा शिफ्टमा भुक्तान गरिन्छ। दन्तचिकित्सा लेखांकनको यु.एस.यु. - सफ्ट प्रणालीमा समय र उपस्थिति सुविधा रहेको हुन्छ जसले दन्तचिकित्सा प्रबन्धकलाई काममा कहिले आउँछन् र कहिले काम छोड्दछ भनेर ट्र्याक राख्न दिन्छ। टाइमकीपिंग सक्षम गर्नको लागि, हाम्रो प्राविधिक समर्थन टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, तपाईंले तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेछ कि तपाईं समय राख्नुका साथै समय र उपस्थिति समावेश गर्न चाहानुहुन्छ कि। दन्तचिकित्सा लेखांकनको यु.एस.यु. - सफ्ट प्रणालीले तपाईंलाई कामहरूको बिभिन्न प्रकारहरूको आंकलन गर्न अनुमति दिन्छ जुन कामदारहरूले विभिन्न तरिकाले गर्दछन्। तपाइँको आउट पेशेंट रेकर्डहरू विद्युतीय तवरले सुनिश्चित गर्दछ कि ग्राहकको उपचारको बारेमा जानकारी, एकै ठाउँमा जम्मा गरिएको, कहिँ पनि हराउँदैन, र दन्त चिकित्सकहरु द्वारा अयोग्य हस्तलेखनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भयो। ग्राहकको उपचार गर्ने दन्त चिकित्सकको साथसाथै दन्तचिकित्साका प्रमुख दन्तचिकित्सक, जससँग सबै कार्डहरूमा पहुँच छ, जहिले पनि उनीहरूलाई रूचि रहेको जानकारी द्रुत रूपमा फेला पार्न सक्षम हुनेछन्।
एक ग्राहक उपचार लगबुक राख्नुहोस्। बिरामीको उपचार गरिसकेपछि, डाक्टरले अघिल्लो भेटघाटको बारेमा जानकारी प्रविष्ट गर्न बिरामी ईतिहास बुकबुकमा रेकर्ड सिर्जना गर्दछ। डाक्टरले उनीसँग काम गर्ने दाँत तोक्न आवश्यक छ र फिल्ड्स 'डायग्नोसिस', 'गुनासोहरू', 'एनामेनेसिस', 'उद्देश्य', 'उपचार', 'सिफारिशहरू' (यदि आवश्यक छ भने, तपाईं अन्य क्षेत्रहरू थप्न सक्नुहुन्छ वा अनावश्यक हटाउनुहोस्)। केस ईतिहास केवल दन्तचिकित्सकले मात्र भरिदिन सक्दछ, तर कुनै पनि कर्मचारी द्वारा जसलाई अन्य कर्मचारीहरूको आउट पेशेंट रेकर्ड सम्पादन गर्ने पहुँच अधिकार दिइएको छ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, यो पहुँच बिनाको डाक्टरले आफ्नो रोगीका लागि केस ईतिहास मात्र सिर्जना र सम्पादन गर्न सक्दछ।
बिरामीहरूलाई बोलाउनु भनेको प्रशासकको कामको महत्त्वपूर्ण अंश हो। तपाईं दन्तचिकित्सा लेखा प्रणालीमा अपोइन्टमेन्टको जानकारीको साथ पाठ सन्देश लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई व्यक्तिहरूको समूहमा पठाउन सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि ती बिरामीहरूलाई कल गर्नुहोस् जसले सन्देश प्राप्त गरेनन्। यो उपयोगी छ जब तपाईंसँग कल गर्न समय छैन वा दन्तचिकित्सामा धेरै बिरामीहरू छन्। बिरामीहरूको सूची माथिको 'एसएमएस पठाउनुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि पप-अप विन्डो सन्देश पठाउनको लागि प्रतीक्षा गरिएको सम्पूर्ण सूचीको साथ देखा पर्दछ। तपाईका बिरामीहरुलाई देख्न सक्नुहुन्छ जसको सन्देश पठाइएको छ, र तपाईले ती व्यक्तिहरुलाई सन्देश पठाउनका लागि लुकाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि बिरामीले उनीहरूको नियुक्ति पुष्टि गरेन भने तपाईले दन्तचिकित्सा लेखांकनको कार्यक्रममा सिधा नियुक्ति रद्द गर्न सक्नुहुन्छ। चाँडै बिरामी कार्डहरू फेला पार्न र उनीहरूलाई डाक्टरहरूको कार्यालयमा नियुक्ति गर्न, लेखा अनुप्रयोगको सुविधाहरू ठूलो सहयोगका छन्। पात्रोमा इच्छित दिन मा राइट क्लिक गर्नुहोस् र 'मिति मा सबै भेटघाट सूची प्रिन्ट गर्नुहोस्' चयन गर्नुहोस्। वर्णानुक्रमित क्रमबद्ध गर्दा कागजको नाममा कार्डहरू छिटो फेला पार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ; दन्त चिकित्सक कुर्सीहरू द्वारा क्रमबद्ध गर्नु अफिसहरू मार्फत कार्डहरू वितरण गर्न प्रयोग गरिन्छ, ताकि बिरामी जसको नियुक्ति सब भन्दा चाँडो समयमै निर्धारित हुन्छ कागजहरूको थुप्रोको माथि छ।
यदि तपाइँ कागजी कार्डलाई वर्णमाला क्रममा भण्डारण गर्नुहुन्न भने, तपाइँले प्रिन्ट विकल्पहरू दिनको लागि अपोइन्टमेन्ट सूचीमा परिवर्तन गर्नु पर्छ। यो गर्नका लागि 'निर्देशक' भूमिकाको साथ काम गर्ने कर्मचारी वा कागजात टेम्प्लेटहरू परिवर्तन गर्ने अनुमति भएको अर्को कर्मचारीले 'सेटिंग्स', 'कागजात टेम्प्लेट' मा जानुपर्दछ, 'नियुक्तिहरू: दिनका लागि सबै डाक्टरहरूको बिरामी' खोज्नुपर्दछ र क्रमबद्ध परिवर्तन गर्नुपर्दछ। मेडिकल रेकर्ड नम्बर वा अन्तिम भेटघाट द्वारा क्रमबद्ध गर्न नाम द्वारा।
दन्तचिकित्सा लेखांकनको USU- सफ्ट प्रणालीका फाइदाहरू आफ्नै लागि बोल्छन्। तपाईंको दन्तचिकित्सामा कामको गति निश्चित रूपमा द्रुत गतिमा निश्चित छ, साथ साथै कामको शुद्धता र ग्राहकहरूको साथ सीधा संचार। यद्यपि यो सबै होइन। तपाईंले दन्तचिकित्सा लेखा प्रणालीको प्रयोग शुरू गरेपछि, तपाईं तत्काल नतीजाहरू प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यसपछिको केहि समय पछि तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि केहि थप कार्यहरू लिनको लागि हामीलाई पर्याप्त विश्वास गर्नुहोस् जसले तपाईंको दन्तचिकित्सालाई अझ राम्रो बनाउन सक्छ! तपाइँको लेखा कार्यक्रम को एक आदर्श कामकाजी सुनिश्चित गर्न, तपाइँलाई विशेष प्रोग्रामरहरूको एक टोली आवश्यक पर्दछ जो तपाइँलाई जब तपाइँको लेखाइ चाहिन्छ तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ। हामीले पहिले नै भनेझैं, लेखालाई हाम्रो लेखा कार्यक्रममा धन्यवादको कारण ध्यान दिइनेछ!